Soomaalida Noorweey ee sharciyadda loo diiday oo laga yaabo qasab in lugu celiyo iyagoo jeebeeysan | Somaliska
Bishan eeynu ku jirno ee nofeembar ayaa soomaalida Oslo waxaa ay dhigeen mudaharaad ee ay kaga soo horjeedaan go’aanaddii dowladda dalkaasi kala laabatay sharciyada 600 oo qof oo soomaali ah kuwaas oo dalka in muddo ah deganaa nolol iyo horumarna ka sameeyey.
Dowladda Noorweey ayaa qorsheeyneysa in dadka soomaalida ee sharciayda u diiday ineey ku celiso Soomaaliya kuwaas oo laga yaabo in qaarkood iyagoo gacmaha ka xiran si qasab ah loogu celiyo. Talaabadan ay dowladda Noorweey ku dhaqaaqeeyso ayaa waxaa hormuud u ah wasiiradda socdaalka dalkaasi haweeneyda lugu magacaaboSylvie Listhaug.
Mar ay u wareemeysaywarbaahinta NRK-ga dalkaasi, ayey sheegtay in dowladdu sameeysay dib u qiimeeyn xaalada Soomaaliya, in sharciayda lagala laabto dad horey u heeystay shacri degnaansho ayey ku tilmaantay ineey tahay arrin qaanuun ahaan suuragal ah oo aan dalkaasi weli laga fulin balse lagu dhaqaaqayo. Dhinaca kale mar ay arrimaha soomaalida uga warameeysay wargeeyska VG ee dalkaasi ka soo baxa, ayey iyadoo isla weeynin muujineeysay tiri “Cidna kuma fariisato kursi dahab ah gudaha Noorweey” iyadoo hadalka ula jeedo in aan si been been ah dalkaasi loogu noolaaneyn.
WasiiraddaNoorweey ayaa lugu eedeynayaa in qorsheyaal ka dhan ah soomaalida ay ku howlan tahay. Saas oo ay tahayna waxaa soomaalida dalkaasi lugu tilmaama kuwa u soo doontay ineey ku noolaadaan ceyr iyo gurashada canshuurta ay bixiyaan dadka reerNoorweey. Xisbiyada dalkaasi ee aad u diidan joojigaanta ajaanibta iyo soomaalida ayaa ku baaqay in ajaanib ay soomaalida ka mid tahay si qasab ah loogu celiyo dalalkoodii iyagoo gacmaha ka xiran. Ugu dambeyntii warkan ayaa imanaya xilli dowladda Noorweey shaacisay ineey soomaali badan ay sharciyada daganaanshaha kala laabaneeyso. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lugu fiiqayaa farta in heshiis la gashay Noorway si dib loogu soo celiyo dadka sharciyada loo diiday, tiiyoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ka dhawaajiyey in dadka sharciyada Noorweey loogu diido ay ku fiicnaan laheyd ineey dalkoodii dib ugu soo laabtaan halkii ay taagnaan lahaayeen dariiqyada.
Horaa Waxaa layiri dal Aadanlahayn waa dareen ku jook. Marka waxwalba filo.
Somalia Nabad u Rajeeya WAA Dalkiina Hooyo aad ku dhalateen kuna soo korteen kan luguugu Adoonsanayo dadbaa dhistay oo Quruxsadey isagoo weliba dhul baraf ah .. Ilaa madax caadil ah damiir wadani ku jiro oo Diin leh wadanka Barwaaqo iyo amni haka sugin..